Home Wararka Golaha Midowga musharraxiinta oo soo dhaweeyay Go’aankii RW Rooble
[Akhriso] Golaha Midowga musharraxiinta oo soo dhaweeyay Go’aankii RW Rooble
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa soo saaray baaq aay ku taageereen go’aankii RW Maxamed Xuseen Rooble uu shaqo ka joojinta ku sameeyay Agaasimihii NISA Fahad Yasin.
Guddiga ayaa ku baaqay in si degdeg ah aay caddaalad u helaan reerka Ikraan Tahliil Faarax.
Qoraalka Midowga ayaa sida u qornaa
Golaha Midowga musharraxiinta wuxuu soo dhowaynayaa go’aanka ay mas’uuliyadda ku dheehan tahay ee uu Raysalwasaare Maxamad Xuseen Rooble shaqada kaga joojiyey agaasimaha Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Goluhu wuxuu u arkaa in go’aanka shaqo joojinta uu fure u yahay caddaalad ay helaan qoyska Ikraan Tahliil oo la afduubay lana dilay. Waxay kaloo billow u tahay soo celinta sumcada hay’adda iyo kalsoonida ay shacbaku ku qabi karaan.
Goluhu wuxuu dalbanayaa in baaritaan lagu sameeyo taliyihii xilka laga joojiyey. Goluhu wuxuu u arkaa qoraalka ka soo baxay Maxamad C/laahi Farmaajo oo ah Madaxweyne xilkiisu dhamaaday mid lagu carqaladeynayo cadaalad u raadinta qoyska Ikraan Tahliil, lagu qalqal gelinayo amniga dalka iyo kan doorashooyinka. Madaxweynaha xilkiisu dhamaaday wuxuu cadaystay in uu saaxiibkiis kala wayn yahay ilaalinta xuquuqda muwaadinka, dastuurka dalka iyo danta qaranka.
Goluhu wuxuu cadaynayaa in Raysalwasaare Rooble uu masuul ka yahay amniga dalka iyo kan doorashooyinka, wuxuuna Goluhu ku garab taagan yahay go’aanka uu cadaaladda ugu raadinayo ehelka Ikraan, kaga dhexsaarayo hoggaanka NISA arrimaha doorashooyinka, kuna soo celinayo sumcadii hay’adda
Goluhu wuxuu ugu baaqaya ciidanka qalabka sida in ay fuliyaan amarka Raysalwasaaraha, kana fogaadaan ku milanka siyaasadda, kana digtoonaadaan in ay ku kadsoomaan fariimaha Madaxweynaha xilkiisa dhamaaday ee lagu qalqal gelinayo amniga dalka.
Goluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed, Golaha Wadatashiga Qaran, iyo beesha caalamkaba in ay gacan ku siiyaan Raysalwasaare Rooble sidii uu cadaalad ugu heli lahaa ehelka Ikraan Tahliil, dalkana loogu diyaarin lahaa doorashooyin suurageliya isbedel deg deg ah oo si nabad iyo xasilooni leh ku dhaca.
Ugu danbayn Goluhu wuxuu u rajaynayaa agaasimaha cusub ee NISA in uu soo celiyo sumcaddii Hay’adda, kana fogaado wax kasta oo dhaawacaya kalsoonida iyo aaminaadda lagu qabo hay’adda iyo hoggaankeeda.. Goluhu wuxuu mar walba garab taagan yahay sidii ay cadaalad ku heli lahaayeen qoyska iyo ehelka Ikraan Tahliil.